Dow of Dogs: ၀ င်ငွေ ၄% ကျော်သောစိတ်နှင့်အပြာရောင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေပါ။ အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B4B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 6, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, အဆိုပါ Dow 2020 ၏ခွေး, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
၂ နှစ်တာအမေရိကန်ဘဏ္asာရေး ၀ င်ငွေသည်ဆက်လက်ကျဆင်းနေသဖြင့်ယခု ၁.၃၉ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၀ င်ငွေရရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေနေကြသည်။
Dogs of the Dow တွင်ပါ ၀ င်သောအစုရှယ်ယာများအစုရှယ်ယာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် passive ဝင်ငွေရရှိရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပျမ်းမျှလက်ရှိထုတ်လုပ်မှု 4.18% ၏။
(စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးသည် 10-3-19 ကဲ့သို့အခကြေးငွေနှင့်မကိုက်ညီပါ)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာသည် ၀ င်ငွေတိုးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖြည့်ဆည်းရာတွင်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုမျှော်ကိုးကြသည် အမျိုးမျိုးဝင်ငွေ နှင့်ခက်ခဲတဲ့စျေးကွက်များတွင်၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးတည်ငြိမ်မှုသည်။
2 နှစ်၏အထွက်နှုန်းနှင့်အတူ အမေရိကန်ဘဏ္Treာရေးဆက်လက်ကျဆင်းနေယခုအခါ ၁.၅၉% သာရှိသေးသည်။ အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၀ င်ငွေကောင်းကောင်းရရန်ဝင်ငွေရရှိရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေနေကြသည်။
ဒီကွာဟချက်ကိုကျော်လွှားရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုမှာ Durig's တွင်ရှိသောစတော့ရှယ်ယာများဖြစ်သည် အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများဖြစ်လျက်ရှိ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုကိုင်သော အပြာရောင်ချစ်ပ်ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာရှည်လျားပြီး၊ ခိုင်မာတဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေပေါ့။ Dogs of the Dow တွင်ပါ ၀ င်သောအစုရှယ်ယာများအစုရှယ်ယာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်အတွက် ၄ င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်အတွက်ပေးဆောင်ရသည့်ငွေပမာဏထက် ၄% ကျော်ပိုများပြီးငွေစျေးကွက်အများစုထက်များစွာသာလွန်သောကြောင့် passive ဝင်ငွေရရှိရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Thornburg ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမှငွေမန်နေဂျာဖြစ်သူ Ben Kirby ကသူသည်စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ကျဆင်းမှုများကိုသိသိသာသာမည်သို့ရင်ဆိုင်သည်ကိုရှင်းပြသည်။ CNBC နှင့်အင်တာဗျူးတွင်:
လာမည့်နှစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုဆန့်ကျင်ရန် Kirby သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးငွေပေးနေသည့်စတော့များကိုစွဲကိုင်ထားသည်။
အမြတ်အစွန်းပေးတဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့သူတို့ဟာဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းလက်ကအောင်နိုင်ပြီးအမြီးအမြတ်လည်းမများလွန်းလို့ပါ။ အကယ်၍ စတော့ရှယ်ယာများဆက်လက်တက်နေလျှင်သင်၏အမြတ်အစွန်းပေးဆောင်သောစတော့များလည်းပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ စတော့ရှယ်ယာများကျဆင်း။ ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖြစ်လျှင်သင်၏အမြတ်အစွန်းပေးဆောင်သည့်အစုရှယ်ယာများသည်ခုခံကာကွယ်နိုင်သည်။
ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် ငွေချေးစာချုပ်များထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အောင်မြင်သောတှငျကငျြးပခဲ့အဖြစ် Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည် ထို့အပြင်အရာဖြစ်ပါသည် ဝင်ငွေ Aristocrats Portfolio ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း.
အဆိုပါ အဆိုပါ Dow ၏ Dogs ကို၏ဒီဇိုင်း အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းစတော့ရှယ်ယာအချို့ကိုပစ်မှတ်ထားဖို့အစုစုနိုင်ပါတယ် Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ (DJIA) မှ ဦး ဆောင်လျက်ရှိသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏သက်တူရွယ်တူများ၏သိသာထင်ရှားသောသမိုင်း outperformance။ အဆိုပါအစုစုတစ်ခုနှစ်စဉ်တစ်သက်တာပြန်လာရှိပါတယ် 12.87%, အနီးဆုံးအခြေခံစံနှုန်း၏နှစ်စဉ်တစ်သက်တာပြန်လာကျော်လွန် (SPDR Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ETF) က နှစ်စဉ် 3% ကျော်.
Walgreens (NYSE: WBA) ဖြစ်ပါသည် Dow Portfolio ၏ Dogs မှအပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၀၁ ခုနှစ်တွင်ချီကာဂိုမြို့ရှိထောင့်စားအစားအစာဆိုင်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Walgreens သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဒုတိယအကြီးဆုံးမူးယစ်ဆေးဆိုင်ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်တိုင်း၌နေရာပေါင်း ၉၅၀၀ ကျော်ရှိသည့်နေရာတွင်ရှိသည်။ အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် Walgreens စတိုးနှင့်ငါးမိုင်အကွာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ Walgreens သည်နေ့စဉ် ၈ သန်းကျော်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
Walgreens သည်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အစုရှယ်ယာရှင်များအားအစုရှယ်ယာရှင်များအားပေးဆောင်သည့်အမြတ်အစွန်းများမှတဆင့်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏တန်ဖိုးကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ရှိခြင်း ပြီးခဲ့သည့် 15 နှစ်များအတွက်မှန်မှန်တိုးမြှင့်မြတ်များ၅ ဆင့်မှ ၅၀ ဆင့်အထိသို့ဆိုလျှင် ၁၀x နီးပါးတိုးလာသည်။
ရှေ့ဆက်သွားနေစဉ်တွင် Walgreens သည် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များမှတစ်ဆင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက် ပို၍ ပင်တန်ဖိုးကိုထပ်မံဖြည့်စွက်နေပုံရသည် ဝယ်လိုအားပေးပို့အပေါ်၎င်း၏ပစ်လွှတ် လူကြိုက်များပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူလက်တွဲမှတဆင့် Postmates.
Walgreens ပင်ဖြစ်ဟန်ရှိသည် “ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်” မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြန့်ဝေရေးအကြံဥာဏ်ကိုရှာဖွေခြင်း။ ဤကဲ့သို့သောဆန်းသစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များအားမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည် Walgreens အားဆေးဝါးနှင့်ဆေးဆိုင်နယ်ပယ်တွင်အဓိကကျသောနေရာတွင်ဆက်လက်ရှိနေရန်ကူညီသင့်သည်။
Dow of the Dogs မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုလက်ခံရရှိရန်အတွက်အောက်တွင် Sign Up လုပ်ရန်နှင့် ပို၍ များစွာလိုအပ်သည်!
Durig ရဲ့ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ၎င်း၏ဆက်လက်ခဲ့သည် ခိုင်မာတဲ့သမိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာ တစ်သက်တာပြန်လာအတွက်၎င်း၏အရင်းနှီးဆုံးအခြေခံစံနှုန်းသာလွန်။ အစုစုအတွင်းရှိအပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေမှုအစုရှယ်ယာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို Dow Jones ၏အမြတ်အစွန်းအချို့နှင့်ထိတွေ့မှုရှိစေပြီး ၀ င်ငွေကိုပိုမိုစုံလင်စေရန်နှင့်ဖြည့်စွက်ရန်ကူညီသည်။ ထို့အပြင်လျှော့ချရာတွင်စုစုပေါင်းစျေးကွက်အထောက်အကူများနှင့်အစုစု၏နိမ့်ဆက်စပ်မှု မတည်ငြိမ်မှု စျေးကွက်စီးပွားရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့ပါးစေပြီးညအချိန်တွင်ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်ရန်ကူညီသည်။
၀ င်ငွေနှင့်အထွက်နှုန်းကိုအတိုးနှုန်းကျလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေရှာဖွေသူများအတွက် Durig's Dow Portfolio of Dogs သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပုံရပြီးကောင်းမွန်စွာရောနှောနေသည် Durig ရဲ့အခြားအောင်မြင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်.
Durig Capital တွင်မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းအစုံအလင်ရရှိနိုင်သောမဟာဗျူဟာများစွာရှိသည်။
ရေ ယခု၎င်း၏အလွန်အမင်းအောင်မြင်သောကမ်းလှမ်းနေသည် Fixed ဝင်ငွေ2(FX2) အစုစု, အ Dividend အရစ္စတိုတယ် 40 အစုစု, ပြီးနောက် ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု TD Ameritrade Institutional တွင်သီးခြားအကောင့်များမှတဆင့်အခြားမှတ်ပုံတင်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးများ၏ဖောက်သည်များအား ဤအချက်သည်သင်နှင့်သင်၏လက်ရှိအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ။
ခွငဖြေ - အတိတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ပြသမဆိုစွမ်းဆောင်ရည်ဒီထုတ်ဝေ 10-3-19 ၏အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ * အဓိကအသုံးပြုသောအခြေခံစံနှုန်းမှာ SPDR Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ETF ဖြစ်သည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံသင့်သည်။
4% ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာ အပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ အပြာရောင်ချစ်ပ် ကိုကာကိုလာ အများပိုင်သတင်း csco cvx အမျိုးမျိုး ခွဲဝေ ပိုင်းခြေဝင်ငွေခွန် ခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း ခွဲဝေအထွက်နှုန်း Dividends đi DJIA ခွေး အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ S & P 500 ၏ခွေးများ dow Dow Jones Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ရေ Durig Capital ကို ရှယ်ယာ မြင့်မားသောမြတ်များအထွက်နှုန်း မြင့်မားသော Dividend အထွက်နှုန်း မြင့်မားသည် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း မြင့်မားအထွက်နှုန်းထိတ် IBM က ဝငျငှေ ဝင်ငွေအမျိုးမျိုး ဝင်ငွေနည်းဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ jnj ဇူလိုင်လ ko တစ်သက်တာ မိုက်ကယ် B Higgins mrk Nasdaq NYSE ပိုကောင်းအောင် ပိုကောင်းပါတယ် performance pfe pg အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ Postmates ပြန်လာ စတော့ရှယ်ယာ စတော့ဈေးကွက် စတော့ရှယ်ယာ ဘဏ္.ာရေး us အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု vz လမ်းလျှောက် WKB xom အသားပေး
အဆုံးစွန်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်မှုနည်းဗျူဟာ Cheat Sheet